हस्तमैथुन नियमित गर्नेहरु मानिस साँच्चै दुब्ला हुन्छन् ? यस्तो छ रहस्य - ज्ञानविज्ञान
धेरैजसो मानिसहरु आत्म सन्तुष्टिका लागि हैस्त्मैथुन गर्ने गर्दछन । उनीहरु नियमित हस्तमैथुन गरेता ओअनी डर रहेको हुन्छ कि यसले उनिहरुलाइ केहि असर त पुर्याउने हैन ? दुब्लो हुनुमा हस्तमैथुनको भूमिका कतै हस्तमैथुनले हानी गर्छ कि ? धेरैमा चासो र चिन्ता हुन्छ । यौन आनन्द प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये सबैजसोका लागि यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौन सम्पर्क गर्दा यौन अङ्गहरू एक–आपसमा घर्षण गराइन्छ ।
सिद्धान्तत: यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन अङ्गको घर्षणबाट यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले चिकित्सक भन्छन् यौनसम्पर्क गर्दा हानि हुँदैन तर हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ भन्न मिल्दैन । तपाईंको दुब्लोपनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक चिन्ता नलिनु नै बेस हुन्छ । हस्तमैथुन एउटा स्वाभाविक कुरा हो । यस विषयमा अनेक भ्रम भए पनि यसले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
सरी छोड्न सकिन्छ हस्त मैथुन गर्ने बानी यस्तै हस्तमैथुनले अनावश्यक गर्भधारण, देहव्यापारीसँगको यौन सम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समय दुरुपयोगबाट पनि जोगाउँछ । अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क नै नहुने भएकाले अहिले चर्चामा रहेका एचआईभी वा अन्य यौन संक्रमण पनि हुन पाउँदैन ।
Topics #दुब्ला #हस्तमैथुन
Don't Miss it यदि यी ३ कुरा भएका पुरुष हुन्छन् अभागी
Up Next ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण यस्तो हुन्छ